I-SC ichitha isicelo se-govt sokuthi sibeke eceleni isinyathelo sokuvinjwa kwemibiko mayelana nekhomishini kashukela
ISLAMABAD: Inkantolo Ephakeme ichithe isicelo sikahulumeni wobumbano ngoLwesine sokumiswa kokusetshenziswa kweziphakamiso zeKomidi Lophenyo NgeShukela (SIC).
Ibhentshi lamalungu amathathu eNkantolo eNkulu yamaJaji uGulzar Ahmed lilalele leli cala namhlanje enkantolo ngesicelo esenziwe yisinqumo seNkantolo eNkulu yaseSindh esenze ukuthi uhulumeni angathathelwa izinyathelo ngabanikazi besigamu sikashukela abaphethe intengo kashukela ekuqaleni kwalo nyaka.
Ngokulalelwa kwanamuhla, abameli bakahulumeni bacele inkantolo ukuthi ibone ukuthi ikhomishini le kayikhethi buso yini futhi nokuthi bezwe ngesimo sabanikazi bokushukela.
Abaphathi bezomthetho babuze ukuthi ngabe umbiko we-SIC ungabathinta kanjani abanikazi bezimayini, ubabuze ngezinto ezibakhathazayo ngalolu daba.
UJustice Gulzar Ahmed wengeze ngokuthi lesi simo sidalwe nguhulumeni uqobo njengoba evula uphenyo oluholela emacala enkantolo.
Ummeli kahulumeni uMakhdoom Ali Khan uthe iSouth Mills Association isondele neNkantolo ePhakeme yase-Islamabad ngokwayo futhi ikhomishini inikeze izincomo kuphela.
"Uma kukhona okutholakele okunomthelela kunoma yimuphi umbiko kuzobekwa isimangalo," etshela amajaji.
UJustice Ajaz-ul-Ahsan asho khona ukuthi ngokusobala i-SIC ithole iqiniso futhi ikhombe u-'phatha 'nezinye izici ezimbalwa.
"Uma izikhungo zikahulumeni zikhipha isaziso sesizathu sokubukisa, yeka umbono wakho lapho," kusho ijaji.
I-CJP yabe isiphawula ukuthi kuze kube manje asikho isenzo esithathiwe maqondana nanoma imuphi ushukela.
UJustice Ahsan uthe njengombiko we-SIC abanikazi bezimishini zikashukela abezwakalanga, wengeza ngokuthi amalungelo abo azovikelwa.
Ummeli-jikelele, esitatimendeni sakhe, uthe le khomishini ikhomba i-nexus yezepolitiki, kodwa ikholelwa ukuthi akukho cala lokwelashwa okufanele liqulwe nganoma ngubani.
“Ngitshele uhulumeni ukuthi anganikeli izikhungo noma ngabe yisiphi isikhungo ngalolu daba,” kusho futhi enxusa ukuthi uhulumeni unikeze izikhungo ukuthi zisebenze ngokuzimele kulokhu.
"Ikhomishini ebumbene ibuyise imiyalo eyanikezwa izikhungo phambilini ngokuncoma kwami," kusho i-AG.
Uqhubeke wathi lo mbiko waletha i-Nexus ngemuva kwale nkinga, lapho uJustice Ahsan wathi kubonakala sengathi iFederal Investigation Bureau nezinye izikhungo azinawo amandla okwenza kahle.
Ngemuva kwalezi zingxabano, inkantolo enkulu yagcina seyenqabile isicelo sikahulumeni sokungahambisani nombiko we-SIC, yaguqula icala laze lafika kuJulayi 14.
Inkonzo yangaphakathi inselele imiyalo ye-SHC
Ngesonto eledlule, umnyango wezangaphakathi ungene kuNkantolo eNkulu eyophonsela inselelo isinqumo seSindh High Court (SHC) esinqabela uhulumeni wobumbano ekuthini athathe izinyathelo ngezincomo zombiko weKhomishani Yophenyo.
Esicelweni sayo, uhulumeni wobumbano uthe inkantolo ephezulu yatshelwa ukuthi i-SHC inikeze usizo kwinhlangano yoshukela ngaphandle kokulalela uhulumeni.
Funda futhi: Govt ukuphonsela inselelo isinqumo se-IHC mayelana nombiko wekhomishini kashukela
Siphinde sengeza ukuthi isicelo sokuhlala ngeke sikhishwe ngaphandle kokulalela omunye umuntu othintekayo kuleli cala, sinxuse inkantolo ukuthi imemezele ukuthi lo myalelo awuwusizo.
Incwadi yezikhalazo ithi futhi iNkantolo eNkulu yase-Islamabad (IHC) imemezele ukuthi umbiko wekhomishini awuthinti amalungelo enhlangano kashukela.
Umbiko weKhomishini yokuPhenya ngeShukela uveze ezinye zezambulo ezimangazayo mayelana nokuthi intengo kashukela ilungiswa kanjani, nokuthi ukuthunyelwa kwempahla ethengiswayo kuthengiswa kanjani ukuze kutholakale izaphulelo kumanani entela yokuthengisa, nokuthi izinkulungwane zezigidi zamarandi zigcwaliswa kanjani ngabanikazi bezimakethe zikashukela.
Ngokusho kwemithombo, lo mbiko ubalule ngokuningana ukuthi isamba likashukela elithunyelwa e-Afghanistan linyuka kanjani njalo ukukhombisa ukuthi ngabe kuthunyelwa amathani angama-75 ale mpahla ngeloli ngalinye.
Kodwa-ke, lokhu kuyinto engenakwenzeka, uma sazi ukuthi inani elikhulu leloli, noma ngabe ligcwele kakhulu, alidluli kumathani angama-30.
Umkhonyovu nawo ubonakala unenye injongo: ukukhipha imali ngenkani. Uma ushukela uthunyelwa e-Afghanistan, ukukhokha kufanele futhi kube okuvela ezweni elilodwa.
Kodwa-ke, kwatholakala ikhomishini ukuthi abanikazi abaningi besimungumungwane bebethola ama-telegraphic ukudluliselwa izinkokhelo zoshukela oluthengiselwe i-Afghanistan kusuka e-US nase-Dubai, ngenxa yalokho kwabonakala sengathi babemhlophe imali futhi behola amadola ngasikhathi sinye.
Okunye okubalulekile okuqokonyisiwe embikweni ukuthi izinsimbi ezinoshukela zakhokha imali elinganiselwa ku-Rs22bn ngentela kuHulumeni wasePakistan, kodwa kuleyo mali ephelele, i-Rs12bn yabuyiselwa kwizaphulelo. Ngakho-ke, umnikelo we-net wawusondele e-Rs10bn.